Dell Vostro 3480 Windows 10 Black (i7-8th Gen)-3 ~ ICT.com.mm
HomeDell Vostro 3480 Windows 10 Black (i7-8th Gen)-3
Dell Vostro 3480 Windows 10 Black (i7-8th Gen)-3
Intel® Core™ i7-8565U Processor NB0020113 14″ Full HD (1920×10180) 4GB,DDR4, 2666MHz 128 SSD + 1TB 5400 rpm 2.5″ SATA Hard Drive AMD Radeon™ 520 2G GDDR5 Windows 10 Home3Cell Battery... [Learn more]
Brand: DellSKU: 104915N/ASee more: Computer Systems, Dell, Laptops / Notebooks, New Arrivals, ProductsFilter by: 14", 1TB HDD, 4GB RAM, AMD Radeon 520 2GB, Black, EDIT-TWO, Intel Core i7-8th Gen, Laptops (PC), outofstock, USD, Windows 10 Home
14″ Full HD (1920×10180)
128 SSD + 1TB 5400 rpm 2.5″ SATA Hard Drive
Dell Vostro 3480 Laptop က ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်ယူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မြင့် Laptop တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စား Computing စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိဖို့ CPU အဖြစ် i7-8 th Gen Processor ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ RAM 4GB (DDR4, 2666MHz) က လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးမြောက်ဖို့ CPU နဲ့တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကို 14" နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Resolution က Full HD ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။ Laptop ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့ ဒေတာတွေအများကြီးကို ထည့်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက် SSD 128GB နဲ့ HDD 1TBတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Hybrid Drive ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Loading ကြာမြင့်တဲ့ Window နဲ့လုပ်ငန်းသုံး ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို SSD ထဲမှာ Install လုပ်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဒေတာတွေကိုတော့ HDD ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်စေမှာပါ။ ဂရပ်ဖစ်ကောင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေနဲ့ ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုအသုံးပြုချိန်မှာ Laptop ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ ကိုယ်ပိုင် RAM နဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ သီးသန့် ‘Dedicated’ အမျိုးအစား AMD Radeon™ 520 2G GDDR5 ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Window Update Error တွေကြောင့် မိမိရဲ့လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲတွေကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့ Windows 10 Home ကို တပါတည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဘတ္ထရီအတွက်ကိုတော့3Cell ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး မိမိရဲ့ Laptop ကို လက်ဗွေအသုံးပြုပြီး စမတ်ကျကျ login ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ Finger Print Reader လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့ အနက်ရောင်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး လက်ဆောင်အဖြစ် Dell အော်ရီဂျင်နယ် Laptop အိတ် တစ်လုံးနဲ့ Mouse တစ်လုံးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
TPM: Trusted Platform Module 2.0 isahardware based security feature that can be used to create and manage computer-generated encryption keys. It allows you to secure and encrypt your passwords, fingerprints and keys outside of the drive.
Capable processors: Up to 8th Gen Intel® 4-core i5 processors deliver incredible responsiveness and seamless multitasking.Great graphics: Run graphics-rich applications using Intel® UHD Graphics 620 with shared graphics memory.